Wp/kjp/ဖၠုံဍုင်တာခေါဟ်၊ လာလ်ုဆီ့ဏီ့ဘိင်း - Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kjpWp > kjp > ဖၠုံဍုင်တာခေါဟ်၊ လာလ်ုဆီ့ဏီ့ဘိင်း
ပ်ုဖၠုံဖေါဟ် ထီ့ခါန်ႋဖေါဟ်ထံင် လ်ုဏီယိုဝ်၊ ဖူဍေဝဲါ ပ်ုဟှယ့်ထံင် လ်ူဏီမူႋယိုဝ်၊ ထုဂ်လ်ုဝါ် ထာခေါဟ်ထာခၠါင်ႋ လ်ုဏိင်း ယိုဝ်၊ ဟှေး… ဖီဖူ့လ်ုယာ့ကေဝ်ဏါင်းထဟှံင် လာဆီ့ဏီ့ဘိင်း အ်ုဟှာင်ႋအ်ုကျံင်း မွာဲလင်ဖၠိုဝ်းဝယ် ဖၠုံယှင်ဖေါဟ်အ်ုကျံင်းဖၠံင်၊
၁။ ထါင့်ခုက်ဖေါဟ် ဆင်ခူးလင်ဃှိင် မာဆိက်မာဏာဟှံင်လုက်ကၠိင် နွသတ်ဖူ့သျှဋ် ဖါန်စာစိင်း။ ဆင်ဖဝ့်ဖါထင်းနိုင့်မိုင့်ခၠိင်း ဖၠုံဏိင်းထင်းသင့် အူးဍေဟှိင်၊ ဃှူးထီႋဍေခၠေါဟ် အင်းဖံင့်ဍိင်၊ ဖၠုံအင်းၜူးသင့် မုက်ယႋယိင်။
၂။ ထါင့်ခုက်ဖါဍောဟ်အေထံင်ထါင်ဏှ် နွသတ်ဖူ့သျှဋ် ဟ်ုယောဝ်ႋစိုဝ်ဖၠဟ်ဖဝ့်တ်ုကိုဝ်ဖဝ့် ဍးစိုဝ်၀၀်--။ ဟှေး---သုင်းဆီ့ဖေါတ် ထံင်အေသၞဝ့်၊ လုင်ႋသးလုင်ႋခယ့် အးမာႋလှ်--- လေဝ်အင်းထိုင့်လး ဂြုက်တာဝ် ထီဍေသိုဝ်သုဂ်မာႋယှဝ်ယှဝ်၊ ဖၠုံဖေါဟ်သီးဟှေး--ထောဟ်ဖေါဟ်မံင်ဃွှိင်ယူႋမာႋလှ်။
၃။ ဆ်ုခေါဝ်ႋစွးတယ်ထံင်လာသိုင့်၊ သိင်းလးမိင့်လင်ခေါဟ်လံင်ထိုင့်၊ ဖဝ့်ထေါဟ်ကၠီးဖါထင်းနိုင့်မိုင့်။ “ဥတ္တရာနာသတ်” ဏှ်လဝ်ဟှိုင့်၊အင်းဖံင့်ဆီ့ဖေါတ် သိုဝ်ၜးနိုင်၊ ယာႋသုဂ်ဃှါင့်ဟှံင်၊ ယာႋသုဂ်ဃှံင့်သံ့င် လ်ုလုက်လိုင်၊ သုင်းထင်းဟှိင်းသင့် ဟှယ့်တာင်ဆိုင်။
၄။ က်ုဍုဂ်စုဦခါ့အေထံင်လာတာ၊ ထီ့လင်သာ်ဟှင်းခေါဟ်ဃှါင့်ထာ၊ ကျ္ဘာီက်ုလေင့် လီဟှင်းအာ----။ နာသတ်ဖႜဟ်ထင်းစိတ္တရ၊သိင်းဍိုဝ်ထင်း ကၠင်ကၠါင်းဖဝ့်ဖါ ၊ လေဝ်ဍွဲဃှုဂ် ကောဝ်မိင်လကၠာ၊ ကိုဝ်ႋဏိင်းဍေ အင်းဃှယ်ကိုဝ်ႋအ်ုဟှာ။
၅။ လာယာ့ထံင်ထါင် လင့်သင်းဝင်၊ နဝိသာခါနာသတ် အှ်မုဂ်ဍင် ဆ်ုဆိုင်ဝေ့ လ်ုၜံင်ဏီ့ၜံင် ဃှူးဍေဏဲယ္ဘင်သုင်းလင်၊ ပ်ုကျာပဝ်ႋသၞဝ့်ဃှူ့ဃှင် ဖဝ့်ထေါဟ်ကၠီးဖါ အ်ုယံင့်ၜင်၊ ဟ်ုၜးထယ့်တယ် သုင်းလင်ကျင်။
၆။ ဆ်ုဆိုင်ဍောဟ်လင် လာနုဲ့ထံင်၊ ကာလ်ုပါထင်း ထီ့ယွာဖၠံင့် လင်ဆိက်ဖိုင် ဆ်ုမာပ္တံင် ဃှုဲးလင်ၜူးမ(မျ) မွာဲအေဟှံင် လင်သၠာတာ်အှ်လ်ုဖၠံင် ဟှေး…. နာသတ်စေဌမွာဲဍးခံင် ဖဝ့်ကးဍေအ်ုဏါင်ႋဖါထင်းယှံင်။
၇။ ဆ်ုဆိုင်ဆ်ုဆိုင်အးတယ် လာဃှိုဝ်ထံင်ထါင် ဆိက်ထင်းခံင့်ဖၠာထင်းဍုဂ်ပါင် ၜံင်းဖဝ်.သှ်ေၜိုဝ်လ်ုလါင့်ဏါင် ကဝ်သုဂ်သၠာ ဖါထင်းဝိက်ကါင် ၜူးခယ့်ကၠောဝ် လေဝ်ၜိုဝ်ဍေဏါင် နာသတ်ဗြဗ္ဗာဍးစိုဝ်ယါင် မီသးမိင့် ထီ့ဍောဟ်မှ်ေဖၠါင်။
၈။ ဆ်ုဆိုင်ကျုဂ် လာခုဂ်ထံင်ဏှ် ဖဝ့်လာခုဂ်ဖါထင်းသၞဝ့် သရဝဏ်နာသတ် ယေါဝ်ၟစိုဝ်ဖႜဟ် သုဂ်ဆူႋမိင့်ၜုံ လင်ပျောဝ်ဖဝ်ႋ ထီ့ဍောဟ်မှ်ေဖၠာင် ကိုဝ်ဝီးလာခါင်ႋကုံစူးလဝ့် ဖၠုံကိုဝ်ႋဆိုဒ် ဃှူ့ဃှင်ၜးသၞဝ့်။
၉။ လာဆီ့မူႋထံင်ယိုဝ် ဆ်ုခေါဝ်ႋစွးယးဖေါဟ်စါင်းယှိုဝ် သာႋပွဲါ ဖါထင်းဃှိင်ကောဝ် ဟှေး…. ဖေါတ်လီးဖဝ့်ပါကဲဆ်ုဍိုဝ် ကေါတ် ထေံဘိုင် အင်းဍေဖေါတ်နိုဝ် ဍုံမူႋထုင်း ဟ်ုၜးလင်ကၠောဝ်။
၁၀။ က်ုတုဂ်ဝှ် လာမုက်စွးတယ် အာသာဝတီ ယှးဖါန်ခယ် တ်ုကဝ်သွဝ့်ဖါထင်းဃှုဦ လေဝ်ကၠောဝ်က်ုလံင့် ဃှုဲးလင်္ဘယ်၊ ဆုင်းထင်းမှ်ေပုံ လေဝ်ပါမုက်ကုဦ ဖၠႋဘာပ်ုတာ အ်ုထါ်ဆာႋယယ် လေဝ်ကုဂ်ၜူးသိုဝ်အးမာလာဲ ဖီဖူ့ ပ္တံင် ဏှ်အှ်ဝယ်။
၁၁။ ဆ်ုဆိုင်ထင်းသင့် ထံင်လာဏင့်ဖိုင် ယှးလ်ုမုဂ်ခေါဟ် ကြတ္တိကာစိုင် မုဂ်ခေါဟ်ဆ်ုအုင်းလ်ုအှ်လိုင် ဟှေး… ဍိင်လိင်အ်ုဖဝ့် လ်ုနိုင့်မိုင့် ဆိက်လင်ထီ့ မူ့လာႋဆ်ုဆိုင် မ်ုဖၠာယာႋသုဂ် ဍေသုင်းဃှုဲ့သာယိုင် ၜေ့မ်ုအင်းယိုင်ၜးမာဆိုင်။
၁၂။ ၜူး၀၀်ထင်းလာလိင်ထံင်ဝေ့ မီဂသီနာသတ်ယှးဖါန်လုဦ့ ပြိုင်ကုံးၜုံးဝီႋဟှံင်လုက်ခၠေဝ် ဏဝ့်ထင်ၜူးးပုံ ပါမုက်ကုဦ၊ ဟှေ………. ဖဝ့်မူႋယှာ့ဖါႋၜးဟှဝ်ႋသုဦ့ စါင်းကုဂ်ကံင်းၜူးကိုဝ်ႋဏီဍေ ဖၠုံဖီ့ဖူ့ယဝ် ယှောတ်လာကိုဝ်ထုဦ့ သာဏင်းဃှေဝ်။
ခွာဲက္ၜင်မူးခွါ့ရာဓနာဝေ့ အှ်ဆံင်းလာႋဆာ်ကိုဝ်ဟှာဍေ၊ ဏ်ုထါင်အေထံင် ဏ်ုတွါန့် သာဏင်းၜးဃှေဝ် ဖၠုံခွာဲက္ၜင်ဓဍာလင်။ (မင်ရို့)၃….(လေလေမင်ရိုး)၃……. အိုဝ်း ခိုဝ်ဆံင့်ဏး…..။
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/kjp/ဖၠုံဍုင်တာခေါဟ်၊_လာလ်ုဆီ့ဏီ့ဘိင်း&oldid=4399600"